माग्ने बुढाको टिप्पणीः सलमान नआउँदाको कुरामा दु:ख नमाने हुन्छ, यसरि सम्झिए दिल्लीमा दाह्री काट्न वाध्य पारेको घटना – पुरा पढ्नुहोस्……
माग्ने बुढाको टिप्पणीः सलमान नआउँदाको कुरामा दु:ख नमाने हुन्छ, यसरि सम्झिए दिल्लीमा दाह्री काट्न वाध्य पारेको घटना
भारतीय अभिनेता सलमान खानको नेपाल यात्रा स्थगित भएपछि सामाजिक सञ्जाल तरंगित भएको छ । कलाकार्मीदेखि सर्वसाधारणसम्मले विभिन्न खाले प्रतिक्रिया दिइरहेका छन् ।
देशको जल्दोबल्दो विषयमा तत्काल समाजिक सञ्जालमा प्रतिक्रिया जनाउने एक कलाकार हुन् केदार प्रसाद घिमिरे ‘माग्नेबुढा’ । उनले सलमानको कन्सर्ट स्थगित हुँदा धेरै दुख मान्नु नपर्ने भन्दै तात्तातो स्टाटस लेखेका छन् ।
माग्नेबुढा लेख्छन्, ‘इजरायल जाँदा मलाई दिल्लीमा दाह्री काट्न दिइएको दवाव, सुदरपश्चिमका जनताले भारतमा काम गरेर फर्किँदा बोर्डरमा सहेको हेपाई, कपिल आउँदा जितु नेपालको अपमान, सिमाना मिचाई, बेला-बेला नेपाल छिरेर गर्ने उपद्रो आदि हेर्दा सलमानको कार्यक्रम स्थगित नै भए पनि धेरै दुख नमाने हुने देखिन्छ । हामीसँग पनि अनमोलहरु छन् ।’
त्यसपछि उनले ‘नोट’ मा लेखेका छन्, ‘नेपालमा पहिलो प्राथमिकतामा नेपाली कलाकार हुनुपर्छ । नेपाली गीत संगीत पहिलो प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । नेपाली मिडियामा आउने विज्ञापनमा नेपाली मोडेल हुनुपर्छ । नेपालमा जन्मिने बच्चाले पहिलो शब्द आमा नै बोलुन् , मदर, मा वा मम् नबोलुन् । भाषा सकियो देशै सकियो ।’
अन्तिममा उनले लेखेका छन्, ‘सुकिलो लुगा लगाएकी पल्ला घरकी आमाभन्दा झूत्रो लुगा लगाएकी आफ्नै आमा प्यारी ।’
उनको स्टाटसमा मिश्रति प्रतिक्रिया आएका छन् । कतिपयले नेपाली कलाकार पनि कार्यक्रम गर्न विदेश जाने भएकाले विदेशी कलाकार आउँदा आपत्ति जनाउनु नहुने बताएका छन् । धेरैले चाहिँ नेपालमा नेपाली कलाकारले नै प्राथमिकता पाउनुपर्ने माग्नेबुढाको भनाईमा समर्थन जनाएका छन् ।
हामीले माग्नेबुढालाई फोन गरेर सोध्यौं, ‘तपाईं लगायत नेपाली कलाकारहरु पनि विश्वका विभिन्न देशमा गएर कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुन्छ । विदेशबाट कलाकार आउँदा चैं आपत्ति जनाउनुपर्छ र ?’
उनले यस्तो जवाफ दिए, ‘हामीले विदेशमा गएर कार्यक्रम गर्ने भनेको त्यहाँ भएका नेपालीहरुको लागि हो । हाम्रो कार्यक्रम नेपालीहरुले टिकट काटेर हेर्छन् र त्यो पैसा नेपालमा जान्छ । तर, यहाँ भारतीय कलाकारले कार्यक्रम गर्दा टिकट काटेर हेर्ने भनेको नेपालीहरुले नै हो । यसबाट नेपालीको पैसा भारत जान्छ ।’
माग्नेबुढाले थपे, ‘नेपालमा भारतीयहरुले गर्ने कार्यक्रम हिन्दी भाषाको हुन्छ । नेपालीहरुका बीचमा उनीहरु हिन्दी गीतमा नाचगान गर्छन् । यो नेपाली भाषामाथिको अतिक्रमण पनि हो । यस्तै प्रचलनलाई प्रश्रय दिने हो भने भोली नेपाली कलाकारहरु भट्टीमा भेटिन थाल्छन् ।’
के भएको थियो दिल्लीमा ?
निकै वर्ष अगाडि संविधान नबनेर ल्याङल्याङ भइरहेको बेला माग्ने बुढाले एउटा घोषणा गरेका थिए, संविधान नबनिकन आफ्नो कपाल र दाह्री काटि्दन भनेर । त्यही बेला उनी कार्यक्रमका लागि इजरायल जानुपर्ने भयो । उनी दिल्ली एयरपोर्टमा पुगे । तर, त्यहाँ अध्यागमनका कर्मचारीहरुले उनको दाह्री र कपालमाथि आपत्ति जनाए । उनले आफू नेपालको सेलिबि्रटी भएको र यसकारणले दाह्री नकाटेको भन्दा पनि ती कर्मचारीले टेरपुच्छर लाएनन् । उल्टै थर्काए ।
अन्ततः उनी एयरपोर्टबाट बाहिर निस्केर दाह्री-कपाल काट्न बाध्य भए ।
‘त्यतिबेला ममाथि गरिएको अपमान कहिल्यै भुल्दिन,’ माग्ने भन्छन् ।
समाचार स्रोत;-अनलाइन खबरबाट
Prevउपचार खर्च मागेका पुर्व सांसदहरुलाई लालबाबु पण्डितको आयो यस्तो जवाफ …
Nextभोलि टुँडिखेलमा ७५ हजार भेला हुने……..
डलरको भाउ बढेको बेला, घट्यो सुनचाँदीको मुल्य, यस्तो छ आजको भाउ ?
आजको राशिफलः बि.स.२०७७ साल भाद्र २८ गते आइतबार इश्वी सन २०२० सेप्टेम्बर १३ तारीख
फ्लाई दुबईको कस्तो हर्कत, मृत्यु भइसकेको मानिसको टिकट फिर्ता गर्दैन ? (भिडियो सहित)
१५ मिनेटमा भित्र रबिले औषधी पसल बन्द गराए : आजको बिशेष लाइव भिडियो सहित !!